Iyini i-vortex polar futhi inamiphi imiphumela? Isimo Sezulu Senethiwekhi
Namuhla sizokhuluma ngesimo sezulu esiyingqayizivele esaziwa ngokuthi i-polort vortex. Abantu abaningi bayithatha njengokungathi yinto edala ukuthi isigxobo esisenyakatho siqhubekele phambili eningizimu. Lokho kusho ukuthi, okwenzayo ukuthi amazinga okushisa kuyo yonke indawo yasenyakatho yezwe njengoba kuyisigxobo.
Kulesi sihloko sizochaza ukuthi i-polar vortex iyini nokuthi iba namiphi imiphumela esimweni sezulu saseNyakatho Nenkabazwe.
1 Iyini i-vortex polar
3 Imiphumela ye-vortex polar
4 Izintshisakalo ze-polar vortex
Uma sikhuluma nge-polar vortex sisho indawo enkulu yengcindezi ephansi eyakha eduze nezigxobo zoMhlaba. Imvamisa, le vortex ye-polar ivame kakhulu esigxotsheni esisenyakatho. Le ndawo yengcindezi ephansi iqukethe umoya obandayo obandayo owenza amazinga okushisa ehle kakhulu. Ibizwa ngokuthi i-vortices ngoba ibhekisa ekujikelezeni lo moya okunezinaliti zewashi futhi uvumela umoya obandayo ukuthi uhlale isikhathi eside eduze kwezigxobo. I-polar vortex iba buthakathaka ehlobo futhi iyaqina ebusika.
Kwesinye isikhathi ebusika basenyakatho Nenkabazwe le vortex ibangela ukuthi umoya obandayo uhambe kude kakhulu naseningizimu kanye nomfudlana wejet. Lokhu kwenzeka njalo ebusika futhi kuhlotshaniswa namagagasi abandayo aqhamukayo aqhamuka e-Arctic e-United States. Igagasi elisanda kubanda nelinzima kakhulu ukwenzeka lelo likaJanuwari 2014.
Lo mkhuba wesimo sezulu uvamise ukudideka abanye abakade bekhona. Leli gama lisanda kuduma ngenxa yokusetshenziswa kwalo yizazi zezulu. Labososayensi bahlola i-polort vortex ngokuhlaziya izimo ezenzeka ngamashumi ezinyawo ezinyawo emkhathini. Kodwa-ke, lapho amazinga okushisa ahambisana nalesi simo sezulu, ezinye izifunda zomhlaba zithinteka kakhulu. Lesi simo asigcini nje e-United States, kwenzeka futhi kwezinye izingxenye zeYurophu neAsia. Ingozi kuphela le nto engabamela abantu ukuthi ubukhulu bamazinga okushisa buyehla kanjani, kuthumele umoya obandayo osakazekela ezindaweni eziseningizimu ezingavamisile ukubanda.
Njengoba kungathinta izifunda ezingavamisile ukubanda, kuvamile ukuthi imithelela ethile yenzeke kubantu nasezilwaneni nasezilwaneni. Kodwa-ke, ungethuki lapho uzwa imininingwane nge-polar vortex. Ukuphela kwento ebalulekile ukulungiselela ukumelana namazinga okushisa aphansi kunokujwayelekile. Kunconywa ukuthi ubheke izinto esinazo ezintweni eziphuthumayo emakhaya nasezimotweni ukuze zikwazi ukuzivumelanisa nesikhathi sasebusika futhi ziqinisekise ukuthi ungazilungiselela ubungozi obuba neziphepho zasebusika.
Omunye wemiphumela ephambili yalesi simo sezulu ukuthi iMidwest yase-United States iqhwa. Ukuzwela okushisayo kwamanye amadolobha kufinyelela cishe -50 degrees. Noma kunjalo, amazinga okushisa wangempela aphakathi kuka -20 no -30 degrees. Konke okunye ukuzwa okushisayo okubangelwa umoya we-polar. Ukunciphisa imiphumela yale nto, amadolobha amaningi avula izindawo zokukhosela ezifanele ukuhlala abantu abangakwazi ukuzivikela emakhazeni futhi izikole eziningi ziyavalwa. Ingasaphathwa eyamabhanoyi akhansela izindiza ukugwema imiphumela emibi nezingozi ezingaba khona.
Imiphumela ye-vortex polar
Futhi ukuthi le vortex esezindaweni eziphakeme ekhiqiza indawo yengcindezi ephansi izungezwe ibhande lemimoya elizungeza ohlangothini olusentshonalanga liqonde ngakuwashi. Ngale ndlela, ingagcinwa isondele eduze kwezigxobo isikhathi eside futhi ihlale ibanda. Inkinga yangempela ivela lapho ukugeleza kwenziwa buthaka ukufudumala okungazelelwe kwe-stratosphere. Lokhu kufudumala kwe-stratosphere kwenza ukuba umoya obandayo ukhule usuke ezigxotsheni uye ezansi. Lokhu noma kunomphumela wazo ezindaweni ezingasetshenziswanga kakhulu ukubanda kwamakhaza. Kokubili izimbali, izilwane nabantu kufanele bavumelane nala mazinga okushisa ngesikhathi i-polar vortex ihlanganisa.
Ngenxa yalokho, lapho i-stratosphere ifudumala ngokuzumayo, i-polort vortex iyasinda kancane futhi ithumela umoya opholile eningizimu, uthinte izindawo eziningi zase-United States kanye nomfula i-jet. Lesi simo asisisha, kepha okokuqala lapho sanyatheliswa mayelana nalesi sihloko kwakungo-1853. Iphinde ihlotshaniswe namanye amagagasi abandayo eNyakatho Melika ibhaliswe ngoJanuwari 2014, noma leyo ka-1977, 1982, 1985 no-1989.
Kanye namakhaza ashubisa umnkantsha kanye namazinga aphansi okushisa, kwenzeka amakhaza amakhulu kakhulu. Lawa makhaza enza impilo ibe nzima kubantu abangawajwayele amakhaza. Eminye yemiphumela yendlela yokuphila emadolobheni ukuthi imigwaqo kumele isikwe ngenxa yeqhwa eleqile kanti eminye imizila yezokuxhumana ayinqamukile. Kukhona nokunqamuka kukagesi ezindaweni eziningi zasemadolobheni.
Izintshisakalo ze-polar vortex
Leli gama laziwa ebusika buka-2014 ngenxa yokufudumala okwakuthinta iNyakatho Melika.
Cishe njalo ngonyaka lapho le nto yenzekile, irediyasi ene-stratospheric kungamakhilomitha angaba yinkulungwane.
Ukuze ulinganise indawo nendawo ye-polar vortex, kudingeka izilinganiso eziningi ku- izingqimba zomkhathi.
Ama-vortices we-polar tropospheric nawo akhona futhi abuthakathaka ehlobo futhi aqine ebusika.
Uma lesi simo sibuthakathaka, izivunguvungu ezingaphandle komhlaba ezivame ukukhuphuka zibheke enyakatho zishayisane futhi ezazingama-vortices amancane ngaphakathi kwemisinga ye-polar. La ma-vortice amancane avame ukuhlala inyanga.
Ukuqhuma kwentaba-mlilo okwenzeka ezindaweni ezishisayo kungadala ukuthi i-polar vortex iqine ebusika obuningi.
Njengoba ukwazi ukubona, lesi simo sezulu sisanda kuduma futhi kubaluleke kakhulu ukwazi imiphumela yaso ukuvimbela imiphumela yaso.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Iyini i-vortex polar